Maitiro ekudzidzisa vana zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kudzidzisa vana zvinoenderana neBhaibheri
Kudzidzisa vana zvinoenderana neBhaibheri. ari vabereki ndivo vane basa rakanangana nedzidzo yevana vavo. Naizvozvo, ivo vanofanirwa kuvadzidzisa kubva munzira yaIshe, nerudo rusina mugumo, pfungwa yekutarisira nehungwaru.
Un hutano uye hwakadzikama nharaunda yemhuri Izvo zvakare zvakakosha kubatsira kukura kwevana mune yavo yemagariro, yepanyama, yemanzwiro, yehungwaru uye yekuumbwa kwemweya, pamazera ese uye matanho ehupenyu.
1 Maitiro ekudzidzisa vana zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho
1.1 1. Dzidzisa kuda Mwari nemuvakidzani
1.2 2. Dzidzisa nemuenzaniso
1.3 4. Dzidzisa kuteerera
1.4 4. Dzidzisa nezvemhedzisiro yesarudzo dzakaipa
1.5 5. Anodzidzisa tsika nemitemo yechiKristu
1.6 6. Dzidzisa nekuvapo kwako
2 Maitiro ekudzidzisa vana zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho mumatanho
2.1 Maitiro ekudzidzisa vacheche zvinoenderana nebhaibheri
2.2 Kudzidzisa vana zvinoenderana neBhaibheri
2.3 Maitiro ekudzidzisa vechidiki zvinoenderana neBhaibheri
2.4 Kudzidzisa vechidiki nevakuru zvinoenderana neBhaibheri
Maitiro ekudzidzisa vana zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho
1. Dzidzisa kuda Mwari nemuvakidzani
Dzidzisa kuda Mwari, kuteerera nekuteerera Shoko rake Ichave iri dzidziso yakanakisa yaungasiire vana vako. Jesu anotitungamirawo pamirairo mikuru iyi: ida Mwari kupfuura zvinhu zvose uye nemuvakidzani wako sezvaunozviita.
Uye ida Ishe Mwari wako nemoyo wako wose, uye nemweya wako wose, uye nefungwa dzako dzose, uye nesimba rako rose. Uyu ndiwo murairo mukuru.
Newechipiri wakadai ndeuyu: Ida umwe wako sezvaunozvida iwe. Hakuna mumwe murairo mukuru pane izvi.
Mako 12: 30-31
2. Dzidzisa nemuenzaniso
Iva muenzaniso wakanaka kuvanaHaisi basa riri nyore, asi ndizvo yakakosha kuitira kuti vagowana mareferenzi yakakosha muhupenyu hwako. Sa muapostora Pauro, isu tinofanirwa kutevedzera Kristu kuitira kuti vana vamuteedzere kuburikidza nesu.
Ivai vatevedzeri vangu, seni ndiri waKristu.
1 VaKorinde 11: 1
4. Dzidzisa kuteerera
La kuteerera chinhu chakakosha mukudzidziswa kwemwana chero upi zvake. Kana iwe usingakwanise kudzidzisa kuteerera, haugone kudzidzisa iyo kuremekedza vamwe, saka unofanira kumudzidzisa kuteerera:
Vana, teererai vabereki venyu muna Ishe, nekuti izvi zvakarurama.
Kudza baba vako naamai vako, unova murairo wekutanga une chivimbiso;
kuti zvikufambire zvakanaka, uye uve nemazuva marefu panyika. VaEfeso 6: 1-3
Nekuda kwaIshe zviisei pasi pehunhu hwese hwevanhu, kungave kuna mambo kana mukuru,
nekumagavhuna, sevakatumwa naye kuti varange vanoita zvakaipa nekurumbidza avo vanoita zvakanaka.
Nekuti ichi ndicho chido chaMwari: kuti nekuita zvakanaka, iwe unonyaradza kusaziva kwemapenzi; 1 Petro 2: 13-15
Kuremekedza uye kuzvininipisa pamberi pevanhu vese.
Kudzai vese. Ida hama. Itya Mwari. Kudza mambo. 1 Petro 2:17
4. Dzidzisa nezvemhedzisiro yesarudzo dzakaipa
Vana vako, muhupenyu hwavo hwese, vanozoita zvisarudzo zvisingaverengeke zvisirizvo uye vanozove nekukanganisa ivo nevamwe. Naizvozvo, iwe unofanirwa kudzidzisa chidzidzo ichi kuburikidza ne runako, kururamisa uye miganho.
Usazvidza mwanakomana wangu, iko kurova kwaJehovha;
Usaneta nekutsiurwa kwavo;
Nokuti Ishe anoranga,
Sababa kumwanakomana waanoda.
Zvirevo 3: 11-12
5. Anodzidzisa tsika nemitemo yechiKristu
Nyika haina misimboti yakanaka, kunyanya tsika dzechiKristu dzakadai se: chunhu, kururama, kutendeka uye kururamisira. Dzidzisa vana vako kuti hupenyu munharaunda, zvisikwa uye vanhu vabatsirwe nezvibereko zvawo zvakanaka.
Hama dzangu, muonde ungabereka maorivhi here, kana muzambiringa ungabereka maonde? Saka zvakare hapana sosi inogona kupa munyu uye mvura inotapira.
Ndiani akachenjera uye anonzwisisa pakati penyu? Ratidza nemufambiro wakanaka mabasa ako neunyoro huchenjeri.
Jakobho 3: 12-13
6. Dzidzisa nekuvapo kwako
Kuvapo kwevabereki kwakakosha pakudzidza kwevana vavo. Zvakakosha kuvepo muhupenyu hwevana vako pamatanho ese ehupenyu hwavo.
Raira mwana nzira yake,
Uye kunyange paanokwegura, haazotsauki pairi.
Zvirevo 22: 6
Maitiro ekudzidzisa vana zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho mumatanho
Maitiro ekudzidzisa vacheche zvinoenderana nebhaibheri
Muchikamu chekutanga ichi, kukura kwemwana kunoitika kuburikidza kusangana kwehunhu, kukurudzira kwekunzwa uye kusangana nenyika yekunze. Vabereki vanofanira dzidzisai vana vane rudo, tichitevera muenzaniso waBaba vekudenga nesu. Iva nehanya chaizvo uye nerudo, uchiteerera kune zvavanoda zvekudya zvinovaka muviri, nyaradzo, uye dziviriro.
Iye mukadzi achakanganwa here chaakazvara, kuti arege kunzwira tsitsi mwana wedumbu rake? Kunyangwe iye akakanganwa, handife ndakakukanganwa.
Isaya 49: 15
Vana vadiki vanoda kutariswa kwakawanda uye kukurudzirwa kwakanaka kukudziridza hunyanzvi hwavo. Iyi ndiyo nhanho yekuteedzera, yeiyo whis, zvakare yekukudziridza zviwanikwa nekumisikidza zvakakosha zvakakosha nemipendero. Vana vanokudziridza hunhu hwavo nehunhu kubva panguva ino. Ida uye gadza miganho, iti "hongu" uye "kwete" nerudo rwakafanana uye chiremera. Naizvozvo, eAnonongedzera misimboti yakakosha yechiKristu kubva pazera diki.
Iva muenzaniso wakanaka kumwana wako. Iwe unozodzidza zviri nyore mafungire uye hunhu hwemhando dzepedyo, nemaitiro anoonekwa munharaunda yako. Dzidzisa vana vako, kubva paudiki, kusvika Ida dzidziso dzaMwari kuburikidza neBhaibherila munamato wezuva nezuva uye dzimwe tsika dzakanaka.
Naizvozvo ivai vatevedzeri vaMwari sevana vanodikamwa.
VaEfeso 5: 1
Maitiro ekudzidzisa vechidiki zvinoenderana neBhaibheri
Iyi ndiyo inonzi "chikamu chakaoma" chevana. Hunhu mukuumbwa uye hunhu hunoratidzika kuyedza kuzvimanikidza. Inguva yeku chengetedza hurukuro yakasununguka uye unzwire tsitsi munguva dzenjodzi dzinogona kumuka. Dzidziso dzakadzidziswa dzinogona kubhombwa nemamiriro ezvinhu akashata, zvinokanganisa, uye zviitiko zvine njodzi, saka zvakakosha kuti:
Chengeta hukama hwakanaka.
Kuramba kwe hunhu husina kunaka tisingatyi kukonana kunodiwa.
Tungamira nerudo, rukudzo nehungwaru.
Vakurudzire kuti vachengetedze a kugutsikana kwakasimba kwekuti ndiani mwanakomana.
Kudzidzisa sei vaduku nevakuru maererano neBhaibheri
Vabereki vane vana panguva ino vanogona kuva vavo shamwari dzakanaka, vabatsiri uye vanopa mazano akanaka. La Hupenyu hwevabereki ruzivo ruchabatsira zvakanyanya kubatsira nekutungamira vana vakuru mune zvavo zvisarudzo, muhupenyu hwavo hwese uye mumhuri inouya.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise kudzidzisa vana zvinoenderana nebhaibheri. Kana iwe uchifarira kuziva kusikwa kwenyika kwainge kuri sei maererano nebible, ramba uchivhura Ziva.online.
Maitiro ekurova Kushungurudzika maererano neBhaibheri
Kusikwa kwenyika kwaive sei maererano neBhaibheri